Thursday January 30, 2020 - 16:26:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya duleedka degmada Jilib ayaa sheegaya in ciidamo diyaarado watay ay habeen hore ku degeen meel qiyaastii 7 KM ujirta magaalada kadibna ay halkaas ku toogteen qof shacab ah.
Ciidamo isugu jiray American iyo Bangaraaf calooshood ushaqeystayaal ah ayaa ku degay dhul beereed dhaca duleedka magaalada Jilib, markii ay diyaaraduhu ciidamada ku dajiyeen banaanka magaalada ayay toogteen Abkoow Aadan Dhurre oo ahaa nin beeraleey 35 sana jir ah balse xilligii ladilayay ayuu ka jillaabanayay biyaha loo yaqaan Dhasheegga oo ah biyo uu fatahay wabiga Jubba.
Ciidamada huwanta ah ee dilka ugeystay qofka shacabka ah ayaa falkan geystay xilli ay baqa carar ahaayeen oo ay doonayeen in ay ku baxsadaan diyaarad utiillay banaanka Jilib kadib markii dhaq dhaqaaqooda laga war helay.
Warbaahinta Islaamiga ah oo gaartay goobta ay ciidamadu kusoo degeen ayaa sawirro kasoo qaadday Meydka Allaha unaxariistee Abkoow Aadan Dhurre.
Waxgarad katirsan beesh Jareer Weyne oo uu kasoo jeeday ninka ladilay ayaa falkan cambaareeyay waxayna sheegeen in Mareykanku markaan uu ubareeray xasuuqa shacabka Soomaaliyeed isagoo ku marmarsiyoonaya ladagaallanka Al Shabaab oo uu uyaqaan Koox Argagxiso.
Halkan ka dhageyso ehellada Ninka ladilay oo warbaahinta lahadlay MP3.